कोरोना जोखिम बढेको भन्दै आवश्यक सतर्कता अपनाउन चिकित्सकहरूको अपिल - Aarthiknews
कोरोना जोखिम बढेको भन्दै आवश्यक सतर्कता अपनाउन चिकित्सकहरूको अपिल
क्उनले कोरोना संक्रमण रोगमा परीणत हुँदै गएपछि मात्रै कदम चाल्दा ढिलाई हुने भन्दै नेपालमा कोरोनाको जोखिम निम्त्याउने कामपनि सरकारले नै गरेको गम्भीर आरोप लगाए । उनले भने,‘सरकारले कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रणको लागि आवश्यक कदम चाल्न सकेन् । पिसिआर टेस्ट जब बढाउनुपर्नेथियो, त्यतिबेला सरकारले परीक्षणको दायरा नै घटायो ।
हामीले त बारम्बार परीक्षणको दायरा बढाउ भनेर सरकारलाई भनेकै थियौं । तर, सरकार गम्भीर भएन् ।’ उनले पिसिआर परीक्षण गर्नको लागि सरकारलाई केले रोकेको थियो ? भनेर प्रश्नसमेत गरे । उनले भने,‘सरकारसँग पैसा छ, तर खर्च सकिरहेको छैन् ।’ तर, सरकारले जनस्वास्थ्यमा खेलबाड गरेको उनको आरोप छ ।
उनले दैनिक १२ हजारदेखि १५ हजारसम्म पिसिआर परीक्षण गरिनुपर्ने बताए । उनले नेपालम अस्पतालमा बेडको कमि रहेको पनि सुनाए । उनले भने,‘सरकारले बेड बढाउनेतिर ध्यान दिनुपर्नेथियो । हरेक हेल्थपोष्टमा कम्तिमा २५ बेड थप्नुपर्छ ।’ उनले अब सरकारले गौंडा ढुक्नुपर्र्ने बेला आएको पनि बताए ।
कोरोना भाइरसका दुई नयाँ स्ट्रेन विरुद्ध के अहिलेका खोप प्रभावकारी होलान ?
इटलीमारा सङ्कटकाल अवधि थपियो, १० बजेदेखि विहान पाँच बजेसम्मलाई निषेधाज्ञा
पाएनन् दुई हजार ७२१ जनाले कोरोना दाबी भुक्तानी
५१ अर्ब पुँजीगत खर्च हुँदा ४ खर्ब ५५ अर्ब राजस्व संकलन
मञ्जुश्री फाइनान्सको २३.५० लाभांश स्विकृत, घिमिरे नयाँ अध्यक्ष
नीलडेभिड्सको सपना पुरा भएको दिन, उद्योगपति राजेन्द्र खेतानले बधाइ दिए